१२ चैत । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने दुइटा उपाय छन्— कसैसँग हेलमेल नराखी घरभित्रै बस्ने र पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने।
गुगलले जनहितका लागि जारी गरेको सूचनामा सम्मानसाथ राखेको उक्त तस्बिर एग्नस सेमलवाइजको हो। उनी १९ औं शताब्दीका हंगेरियन डाक्टर हुन्। उनले सन् १८४७ मा पहिलोपटक 'रोग संक्रमणबाट बच्न हात धुनुपर्छ' भनेका थिए। आजभन्दा १ सय ७३ वर्ष पहिले उनले भनेका यही कुरा आज व्यक्तिगत सरसफाइ निम्ति अपरिहार्य छ।
यसै क्रममा प्रसूति क्लिनिकको एउटा वार्डमा मातृ मृत्युदर उल्लेखनीय रूपले बढ्यो। ब्रिटिस मेडिकल जर्नल 'बिएमजे' मा प्रकाशित उनको अनुसन्धानअनुसार त्यति बेला उक्त वार्डमा भर्ना भएका १३ देखि १८ प्रतिशत महिलाको प्रसूतिलगत्तै मृत्यु हुने गरेको थियो। उनीहरू बच्चा जन्माएपछि ज्वरोले थला पर्थे र अन्तिम सास फेर्थे। त्यही क्लिनिकको अर्को वार्डमा भने यस्तो मृत्युदर करिब २ प्रतिशत मात्र थियो।
'त्यहाँको सबै पक्षमा प्रश्न उठेको थियो, हामीले सबै विषयलाई शंकाको दृष्टि हेरेका थियौं,' डा. एग्नसले सन् १८६१ मा प्रकाशित आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, 'हामीलाई आमाहरूको मृत्यु के कारणले भइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउनु थियो।'
'शव चिर्दा डाक्टरको हातमा ब्याक्टेरिया संक्रमण भएको हुन्थ्यो। उनीहरूको हात शवमा लतपतिएको हुन्थ्यो,' युनिभर्सिटी अफ एरिजोना कलेज अफ मेडिसिनमा अध्यापन गर्ने जोर्न एच पेर्लोले भने, 'त्यही हातले सुत्केरी गराएर उनीहरू आमाको शरीरमा रोग सारिरहेका थिए।'
डा. एग्नसले प्रसूति वार्डमा काम गर्ने सबैलाई सुत्केरी गराउनुअघि 'क्लोरिनेटेड लाइम' ले राम्ररी हात धुन लगाए। शव चिरेर आएका डाक्टरको निम्ति त हात नधोई वार्डका महिलालाई छुन निषेध नै गरियो। डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले यो नियम पालना गरेका छन् कि छैनन् भनी कडा निरीक्षण गर्न थालियो।
'प्रसूति वार्डमा महिलाहरूको मृत्युका पछाडि डाक्टर नै जिम्मेवार छन् भन्ने एग्नसको भनाइले कोही पनि खुसी थिएनन्,' तुलजियकीले भने, 'उनको यो अवधारणा कसैले रुचाएनन्। डाक्टरहरूलाई यस्तो लाग्यो, मानौं उनीहरूको तुलना सामान्य महिला स्वास्थ्यकर्मीसँग गरिँदैछ। उनीहरू आफूलाई महिला स्वास्थ्यकर्मीको दाँजोमा जान्नेबुझ्ने ठान्थे।'
संक्रमणबाट बच्न नियमित हात धुनुपर्छ भन्ने एग्नस एक्ला थिएनन्। 'त्यसअघि ओलिभर वेन्डेल होल्म्सले सन् १८४३ मा प्रकाशित एउटा कार्यपत्रमा यसबारे चर्चा गरेका थिए। एग्नसकै समयतिर बेलायतका जेम्स यङ सिम्पसनले पनि यसबारे अध्ययन गरेका थिए,' तुलजियकीले भने।
उनले १४ वर्षपछि सन् १८६१ मा मात्र आफ्नो तर्क सविस्तार प्रकाशित गरे। त्यसमा पनि आलोचकबाट 'वैज्ञानिक तर्कविहीन' भनी टिप्पणी भयो।